Jimco, Luulyo, 9, 2021 (Wararka-Maanta) – Wararka ka imaanaya inta u dhaxeysa deegaanada Qeycad iyo Bacaadweyn ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in halkaasi qarax miino kula kacday gaari ay saarnayeen dad shacab ah.Inta xaqiijiyay laba ruux oo shacab ah oo la sheegay iney saarnayeen gaari nooca loo yaqaano Caasi ama Homeey ayaa ku geeriyooday qaraxa qabsaday gaariga aay sarnayeen xili ay marayeen inta u dhaxeysay deegaanada Qeycad iyo Bacaadweyn ee gobolka Mudug.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in gaariga miinada la kacday aay saranayeen labada ruux ee ku dhintay oo kala ahaa wadahii gaariga iyo qof kale oo la socday.
Halka qaraxa miino ku haleeshay gaariga ayaa la sheegay iney aheyd, goob uu dhawaan dagaalo kulul ku dhexmareen Al-shabaab iyo ciidamada Daraawiishta Galmudug oo kaashabaya kuwa dowladda Soomaaliya.
Qaraxyada miinada ee lagu aaso dhulka xiliyada dagaalada ayaa waxaa waxyeelo kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh u geysta dadka shacabka ah.
Guddoomiye Sanyare” Ganacsatadii ka qeyb qaadan weyda taakulaynta dagaalka …
Wararka Maanta : Wararkii ugu dambeeyey dagaal ka qarxay Beledweyne - Wararka Maanta
Wararka Maanta : Mustafe Cagjar oo shaaciyey cidda ka dambeysa inay ciidamo u diraan Ti...
Wararka Somali42 mins ago
Caalamka Videos23 hours ago